Wararka Maanta: Axad, July 15, 2012-Kooxda Baarista Qaramada Midoobay oo ku eedeysay Madaxda ugu Sarreysa DKMG Soomaaliya inay lunsadeen Hanti Qaran
Guddiga baarista ayaa xaqiijiyay in dowladda Imaaraadka Carabta ay ugu deeqday xukuumaddii ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Maxamed C/llaahi Farmaajo lacag gaareysa 10- milyan doollar, isla markaasna $5-milyan oo doollar ay siisay xukuumadda ra’iisul wasaare Cabdiweli Gaas.
Ra’iisul wasaare C/weli Gaas ayaa u sheegay guddiga baarista in $3.5 milyan oo doollar oo ka mid ah lacagtii ay dowladda Imaaraadka ku deeqday aysan soo gaarin oo ay lunsatay xukuumaddii ra’iisul wasaare Farmaajo. Sidoo kale ra’iisul wasaare Gaas ayaa u sheegay guddiga inuu lacag $5 milyan ah dhigay bangiga dhexe ee dowladda Soomaaliya, laakiin arrintaas bangiga dhexe caddayn lagama hayo. Halkaas waxaa ka muuqda farqi u dheexya warbixinta ay dhiibtay wasaaradda maaliyadda iyo caddaymaha bangiga dhexe yaalla.
Madaxweyne dowlad goboleedka Puntland, C/raxmaan Faroole ayay warbixintu ku eedeysay inuu qandaraasyo siisay sharikado shisheeye ah oo si sharci-doarro ah hub u soo galiyay deegaannada uu madaxda ka yahay taasoo kasoo horjeedda cunno-qabateyntii hubka ee ay golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay kusoo rogtay Soomaaliya.
Halkaan kala bax warbixintaas oo dhan :